स्वेता लेख्छिन्, ‘मैले मृत्युलाई रोजिनँ, जीवनलाइनै रोजें’ « Bagmati Page
स्वेता लेख्छिन्, ‘मैले मृत्युलाई रोजिनँ, जीवनलाइनै रोजें’
काठमाडौं । अभिनेत्री श्वेता खड्काले आफु जीवनको नवीन यात्रामा रहेको बताएकी छन् । सोमबार दोस्रो विवाह गर्न लागेकी उनले विवाहको पूर्वसन्ध्यामा लामो स्ट्याटस लेख्दै जीवनका बिभिन्न आरोह अवरोह, उकाली ओराली, सुख दुःख अनि हाँसोरोदनका पलहरुलाई आत्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा उभिएको बताएकी छन् ।
‘जिन्दगीको यो मोडसम्म आईपुग्दा मैले जे जस्ता पिर, ब्यथा, दुःख अनि कष्टहरुसँग सामना गरेकी छु, त्यस भित्रको कहालीलाग्दो अनुभवहरुलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु’ उनले अगाडि लेखेकी छन् ‘अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न् भनेझैं समयको दुस्चक्रले म माथि प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पीडाहरु केवल मलाई मात्र थाहा छ ।’
केही दिनअघि विवाहको समाचार मिडियामा आएपनि अहिलेसम्म मौन रहेकी उनले आइतबार भने स्टाटस मार्फत मुख खोलेकी हुन् । जिन्दगीको लामो बाटोमा तिखा काँडा, ठुलाठुला पत्थर अनि आगोको ज्वालाहरु छरपस्ट भएर छरिएको अनुभव गरेकी उनले जीवनबाट सबै अप्ठ्यारा पन्छाउन विवाह गर्न लागेको समेत स्टाटसमा उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले स्टाटसमा लेखेकी छन्, ‘कि हुती हारेर मर्नुपर्छ, कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अतः मैले मृत्युलाई रोजिनँ, जीवनलाइनै रोजें । अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरुसँग जुध्दै क्रमशः अगाडि बढ्दै गएँ ।’ एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत ६ वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेको बताएकी स्वेताले एकल यात्राका बखतमा धेरै पटक लडेको समेत बताएकी छन् ।
अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग प्रेम बिवाह गरेकी स्वेता श्रीकृष्णको निधनपछि एक्लै जीवन बिताउँदै आएकी छन् । श्रेष्ठको निधनलगत्तै गहिरो शोकमा डुबेकी उनले सो समय अब जीवनभर विवाह नगर्ने अभिव्यक्ति समेत दिएकी थिइन् । अहिले भने जीवनलाई पीडाबाट निकाल्न बिवाह गर्न लागेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो जीवनलाई सांकेतिक रुपमा प्रस्तुत गर्न रंगिन र ब्ल्याकिन ह्वाइट तस्बिर समेत एकसाथ पोष्ट गरेकी छन् ।
यस्तो छ स्वेताको लामो स्टाटस:
म: जीवनको नविन यात्रामा
‘एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ’ भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत ६ बर्षदेखी एक्लै हिँडीरहेकी थिएँ म । मेरो यो एकल यात्राका बखतमा धेरै पटक लडेकी छु । “अब उठ्नै सक्दिन कि” भन्ने कम्जोर भावले थिचेको त्यो बेलामा आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै साहराको आशा हुँदो रहेछ । महिनै पिच्छे करिव हप्ता दिनको लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले एक गिलास पानीसंगै औषधीको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सहयोगको चाह हुँदो रहेछ । मनभित्र गाँठो परेर बसेका अब्यक्त बहहरुलाई बोकेर हिंड्नु भनेको हजार टनको पत्थरलाई टाउकोमाथी बोकेर हिंड्नु भन्दा पनि कठिन रहेछ। तर मैले मेरा बहहरु ब्यक्त गर्ने कोसंग ? मैले साथीसंगतीहरुको भिडमा आँखा डुलाएर हेरें तर मेरो पिंडालाई महसुष गर्न सक्ने कोही देखिनँ । आफन्तहरुको घेरामा खोजेँ तर माइतीमा शरण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पिंडा पोखेर माइतीलाई थप तनाव दिनु हुन्न भन्ने मनन गरें । अत: मेरो हरेक दु:खमा म एक्लै रोएँ, पिंडाहरुमा आँफै सम्हालिएँ अनी अनेकन समस्याहरुसंग एक्लै जुधिरहें ।
५ वर्षे अनुभवले हौसला थप्यो, जनचाहाना अनुसार अध्यक्षको उम्मेदवारी दिए : सुमित्रा त्रिपाठी पाण्डे
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिए सँगै देशव्यापी रुपमा चुनावी माहोल तातेको छ । त्यसैबीच
सिन्धुलीमा गठबन्धनदेखि डरायो एमाले !
सिन्धुली । निर्वाचन नजिकिएसँगै स्थानीय तहमा घरदैलो अभियानलाई प्रथामिकतासाथ तीब्रता दिईएको छ । देशव्यापी रुपमा
कुशलमय बन्दै फिक्कल : गरे महत्वपूर्ण घोषणा !
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै घरदैलो अभियानलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडी बढाईएको छ । यसै क्रममा
केपी ओलीलाई गगनको जवाफ : बालकोट गएर ट्युसन पढाउन चाहन्छु
काठमाडौं । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झुटको पर्दाफास सुन्न नसकेको
मेयरको उम्मेदवारी दिंदै केशव स्थापितले भने ‘गेम इज ओभर’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एमालेका नेता केशव स्थापितले आफू प्रमाणित
सिङ्गो एमालेसँग भिड्न तयार छु : माधव पौड्याल
काठमाडौं । नेकपा एमाले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टीसँग रुष्ट बनेका छन् ।
मेयर दाहाललाई क्याप्टेन लामाले मागे भोट, यस्तो रहेछ कारण…
काठमाडौँ । सेलिब्रेटी पाइलटको रुपमा चिनिएका चर्चित क्याप्टेन विजय लामाले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार